Izindlela zokuqamba ze-liposomal ze-biososal ziyaziwa ngokuma kwazo okuphakeme kwe-bioavailability kanye nesilinganiso sokumunca. IVithamini C, i-antioxidant, iyisengezo esivamile esisetshenziswa kwezidakamizwa ezinomsoco nezokwelapha ukusekela amasosha omzimba womuntu uqobo. I-Ultrasonication iyindlela ethembekile nephephile yokwenza ama-liposomes asezingeni eliphakeme nama-nano-liposomes. Inqubo yokubhuqwa kwe-ultrasonic ikhiqiza ama-liposomes anomthwalo ophakeme wezinto ezisebenzayo, njengevithamini C.
I-Liposomal Vitamin C
Inzuzo yamavithamini we-liposomal ukuthi awalawulwa ngefomu lethebhulethi elijwayelekile noma ifomu le-powder, kepha njengokwakhiwa kwe-liquid okunokwanda kwe-bioavailability. Lokhu kusho ukuthi, amavithamini afakwa emgogodleni wamaseli we-phospholipid spherical, okuthiwa ama-liposomes. Njengoba ama-liposomes anokwakheka okufanayo kwe-phospholipid kulwelwesi lwe-lipid lwamangqamuzana omuntu, angena kalula amangqamuzana omzimba. Ngakho-ke ama-liposomes asetshenziswa ekwakhekeni okwelapha nakwezemithi, kwezithasiselo nakwezondlamzimba, kumkhathi wemvelo nasemkhiqizweni wezimonyo.
Izinzuzo ze-Ultrasonic Liposome Ukulungiselela
Ukusebenza kokufakwa okuphezulu
Ukusebenza Kokuqina Okuphezulu (EE%)
Ukwelashwa okungewona owamandla (kuvimbela ukonakaliswa)
Ihambisana nokwenziwa okuhlukahlukene
I-Ultrasonic Liposomes – bioavailability Uphakeme
Ama-liposomes alungiselelwe i-ultrasonically asiza ukunqoba isikhathi esifushane sempilo, ukuphakama kwamaseli-ulwelwesi lwesibeletho, kanye nokulimazeka komlomo okungekuhle ngenxa yokuwohloka kwesisu nokulimala kwe-enzymatic kwalezi zinhlanganisela ze-bioactive. Ukuvikelwa ku-biloser ye-phospholipid kuvikela izithako ezisebenzayo ekonakalisweni futhi kukhuphule izinga lokufakwa kwamangqamuzana.
I-UIP1000hdT nge-flow flow reaction ye-liposome
Formation Ultrasonic Liposome
Njengoba ukwakheka kwama-liposomes nama-nanoliposomes akwenzeki njengenqubo ezenzakalelayo, isisetshenziswa samandla siyadingeka ukukhuthaza inqubo yokugoqa. AmaLiposomes angama-vesidle we-lipid, akhiwa lapho ama-phospholipids, isib. Lecithin, engezwa emanzini, lapho enza khona izakhiwo ze-bilayer lapho kusetshenziswa amandla anele, isb nge-sonication. I-Ultrasonication isiza ukuhlelwa kwama-molecule we-lipid, ukuze kutholakale isigaba samanzi esizinzile ngokuqina. I-Sonication ayikhuthazi kuphela ukwakheka kwama-liposomes, futhi inciphisa nosayizi wama-liposomes aphumela kuma-nanoliposomes. Ubungako be-liposome yinto ebalulekile uma kukhulunywa nge-bioavailability kanye nesilinganiso sokumunca ngoba ama-liposomes amancane angangena kalula kulwelwesi lweseli.
Ultrasonic Liposome Size Reduction
Ukuhlakazeka kwe-Ultrasonic kuyindlela elula nesebenzayo yokunciphisa usayizi we-liposomes nokukhiqiza ama-nanoliposomes. Ukuze ulungiselele ama-liposomes amancane, ama-vesicles e-hydrate afakwa amazinyane imizuzu embalwa nge-probe-hlobo ultrasonicator ku-reactionor eqondiswa amazinga okushisa. Njengendlela engashisiyo, engeyona eyemishini, ukuncishiswa kosayizi be-ultrasonic akudicileli phansi ama-phospholipids noma amakhompiyutha we-biioactive.
I-UP400St, i-400 Watts homogeniser enamandla e-ultrasonics, yokwenza ama-liposomes
Ama-Ultrasonic processors weLiposome Production
Hielscher Ultrasonics’ Amasistimu asetshenziswa kabanzi emkhakheni wezemithi nokwengezwa ukwakha ama-liposomes asezingeni eliphakeme alayishwe amavithamini, ama-antioxidants, ama-peptides, ama-polyphenols nezinye izinto ezihlanganisiwe. Ukuhlangana nabathengi bayo’ izimfuno, uHielscher unikeza ama-ultrasonicators avela kuma-compact hand-hand lab homogeniser nama-bench-top ultarsonicators ezinhlelweni ze-ultrasonic zezimboni ngokuphelele zokukhiqizwa kwamanani aphezulu we-liposomal formuction. Uhla olubanzi lwama-sonotrodes we-ultrasonic kanye nama-reactors ayatholakala ukuqinisekisa ukusethwa okuphezulu komkhiqizo wakho we-liposome. Ukuba namandla kwemishini yokusebenza kwe-Hielscher sika-Hielscher kuvumela ukusebenza kwe-24/7 emsebenzini osindayo nasezindaweni ezifunwayo.
UChristopher W. Shade (2016): I-Liposomes njenge-Advanced Delivery Systems yamaNutraceuticals. Hlanganisa iMedi (Encinitas). 2016 Mar; 15 (1): 33–36.
UDenenico Lombardo, uPietro Calandra, uMaria Teresa Caccamo, uSalvatore Magazù, uMikhail Alekseyevich Kiselev (2019): Ukuqina kwe-colloidal of liposomes. I-AIMS Equipment Science, 2019, 6 (2): 200-213.
MINA Barbinta-Patrascu, N. Badea, M. Constantin, C. Ungureanu, C. Nichita,, SM Iordache, A. Vlad, S. Antohe (2018): I-Bio-Umsebenzi we-Organic / Inorganic Photo-Generated Composites ku-Bio-Inspired Systems. Ijenali yeRomania yePhysics 63, 702 (2018)
IVitamin C, eyaziwa nangokuthi yi-L-ascorbic acid noma i-ascorbate, iyi-antioxidant encibilikiswa ngamanzi enefomula yamakhemikhali engu-C6H8O6. Njenge-anitioxidant, uvithamini C usebenza njengonikela nge-elektrikhi ekuphenduleni okuhlukahlukene kwe-enzymatic kanye ne-non-enzymatic. Ngaphezu kwalokho, i-Vitamin C iyi-cofactor ekuphenduleni okuningi kwe-enzymatic okulawula imisebenzi ebalulekile yemvelo njengokupholisa amanxeba kanye nokuqanjwa kwe-collagen. I-Scurvy iyindlela eyaziwa kakhulu yokushoda kwe-Vitamin C okunzima okwenzeka ngenxa yokulimala kokuhlanganiswa kwe-collagen.
Njengovithamini, i-ascorbic acid ibalulekile emzimbeni womuntu, okusho ukuthi umzimba awukwazi ukwengeza u-Vitamin C, kepha kufanele udliwe ngokudla. Ukudla okune-vitamin C kufaka phakathi izithelo zosawolintshi, i-camu camu, i-acerola, i-kale, i-roseship, i-currant emnyama, i-guava kanye nezinye izithelo nemifino.
Ngenkathi ukudla okulinganisela kahle kukhipha kalula inani elanele le-Vitamin C. Noma kunjalo, izithasiselo zokudla ezifana namaconsi e-vithamini, amaphilisi, amaphilisi, izimpuphu kanye nama-gummies zivame ukusetshenziswa. Ukudla okunconywe nsuku zonke kwe-Vitamin C okwenziwa yi-European Food Safety Authority kungu-110 mg / usuku kwabesilisa nabesifazane abangama-95 mg / usuku lwabantu abadala besifazane.
Ezokwelapha, uvithamini C uphathwa ngemithamo ephezulu ngaphansi kokuqashwa kwezokwelapha ukuze kusekele ukwelashwa komdlavuza nokuqinisa amasosha omzimba. Isibonelo, ucwaningo luthole ukuthi ukudla njalo amavithamini C okunciphisayo ubude nobunzima bokubanda nokubanda komkhuhlane.
AmaLiposomes ama-vesicles ayindilinga obukhulu be-microsc tropical, angaqala ukusuka kuma-30nm kuya kuma-micrometer ambalwa. Indlela ethembekile yokwakha ama-liposomes ngaphansi kwezimo ezilawulwayo ukugoqa kwe-ultrasonic. Kakhulu, ama-liposomes abunjwe ama-phospholipids, ikakhulukazi i-phosphatidylcholine, kodwa futhi angafaka nezinye izinhlanganisela ze-lipid, njengeqanda phosphatidylethanolamine.
Ukuba ama-vesicles enziwe ngama-phospholipids, ama-liposomes asebenza njengama-microcontainers afaka amakhompiyutha we-bioactive njengamavithamini, ama-antioxidants, ama-polyphenols, ama-peptides, izinto zezidakamizwa (isib. Imigomo, amakhambi okwelapha). I-phospholipid bilayer ifaka umuthi wezinto eziphilayo futhi uyihambise ibe amaseli. Njengoba ama-bilosome bilayers enziwe kusuka kuma-phospholipids afanayo njengama-membranes eseli, ama-liposomes anganqamula ulwelwesi lwamaseli kalula futhi alethe izinto eziwusizo ezingqamuzaneni. Lokhu kwenza ama-liposomes abe ngumthwali wezidakamizwa onamandla kakhulu nge-bioavailability ephezulu kanye nesilinganiso sokumuncwa. Izici ze-amphiphilic zama-bilosers we-phospholipid zenza ukuba i-liposomes inyibilike ku-liquids lwamanzi nolwe-polar.